Cook Islands Offshore Asset Dziviriro Trust
﻿﻿﻿Iyo Cook Islands Trust inopa yakanyanya kuchengetedzwa kwemidziyo kutenderera pasirese. Inowanikwa kumaodzanyemba kweHawaii, maCook Islands akaratidzira nguva uye nguva zvakare kuve neakanyanya kuchengetedzwa kweasset trust kesi yemutemo nhoroondo. Nyaya dzese dzakapikiswa, midziyo yemutengi yakachengetedzwa. Heuno muenzaniso. Ndiani akasimba angave-anopokana zviri pamutemo? Vazhinji vangati Hurumende yeUnited States. Paive nezviitiko zvezviitiko zviviri apo Hurumende yeUS yakaedza kukanganisa kuvimba. Muzviitiko zvese izvi, hurumende yakarasika uye midziyo yakaramba yakachengetedzwa mukati mekuvimbika.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti isu hatingagadzi nemaune kuchengetedzwa kwemidziyo yekuchengetedza midziyo kure neHurumende yeUS. Saka isu tiri kungo cherekedza chokwadi kuratidza kusimba kwechishandiso ichi chepamutemo. Nekudaro, isu hatisi kureva kuti mumwe anofanirwa kushandisa yakadaro mota nenzira iyi.
Mashandiro anoita Cook Islands Trust Anoshanda
Heano maitiro akanyatsogadziriswa Cook Islands Trust mashandiro. Anokumhan'arira zviri pamutemo anonyengetedza dare kuti iwe, "Tambidza mari." Nekudaro, iwe pamwe chete nyora tsamba kuna trastii uchivaudza kuti iwe wakarairwa kudzosera mari. Iwe unochengeta kopi yetsamba uye nhamba yekutevera uye unoratidza mutongi wawakateerera. Iye trasti, kune rumwe rutivi, anodikanwa kutevedzera iwo mirairo yakanyorwa mugwaro reCook Islands Trust. Iyo Asset inodzivirira kuvimba. Saka, isu tinoisa "duress clause" mutrust. Icho chirevo chinoti mutirastii anorambidzwa kuburitsa mari kana iye anowana achimanikidzwa kuita nemutongo wedare.
Saka trustee, anogara kunze kwenyika yako uye ari kunze kwekuwanikwa kwedare rako, haazoshandira pamwe. Iwe unochengetedzwa kubva mukukuvara nekuti wakanyatso teerera mirairo yemutongi. Ndokunge, iwe wakabvunza mutirastii kuti adzose mari. Naizvozvo, iwe uri mune chinzvimbo chawakanyatso kutevedzera mirairo yemutongi. Wakavimbika, zvisinei, haana kudaro, inova dziviriro yepamutemo inoshanda.
Kushandisa trust yekumahombekombe kwakafanana nemuridzi webhizinesi ari kusimbisa mubatanidzwa muNevada kana Delaware. Aizozviita nekuda kwemitemo yavo yepamusoro, pane kumisikidza mubatanidzwa mune imwe nyika. Kugadzira chivimbo muCook Islands kana kune imwe nzvimbo yakakodzera kuti ubatsirwe nemitemo yavo yakafanana zvakafanana. Iyo nyaya yekusarudza hutongi nemitemo yakanakisa yemamiriro ako.
Ndinoziva sei kuti ndinogona kuvimba nevapeki veCook Islands?
Kutanga, mutrasti haafanire kupindira kusvikira "zvakaipa" zvaitika. Chechipiri, hakuna kumbove nemutirastii akatora mari yemutengi. Izvi zvishoma nekuti hurumende yeCook Islands inosarudza zvakanyanya kune avo vavanobvumidza kuve nerezinesi revatrasti. Uyezve, vanodzivirira zvine utsinye indasitiri yavo yemari. Aya maturusi epamutemo sosi yakakosha yemari kudunhu. Nekudaro, matirastii ane marezinesi, anowanzo kuongororwa uye anotariswa zvakanyanya. Chechitatu, kambani yeinishuwarenzi inosunga matirastii, saka mari iri mukutenda kwako inishuwarenzi. Zvakare, ramba uchifunga kuti urikugadzira ichi chepamutemo chishandiso chekuchengetedza midziyo kubva kune isina basa uye isingadzoreke kumatare.
Saka, ungasarudza here kuva ne100% mukana wemari yako kutorwa nematare? Kana iwe ungasarudza kuve ane rezinesi, akasungwa trasti, uyo asina kumbobvira atora mari yemutengi ita zvawakabhadhara kuti vaite: chengetedza mari yako. Uyezve, isu tinoshandisa trust kambani iyo inoda kusvika makumi mana emakore akura.
"Chinhu chakaipa" chisati chaitika, iwe ndiwe unodhonza tambo. Iwe ndiwe unodzora maakaundi ebhengi, nezvimwe Sei? Isu tinoumba yekumhiri yakatemerwa chikwereti kambani (LLC), muCaribbean chitsuwa cheNevis nekuti masimba aya anopa akakwirira LLC kuchengetedzwa kwemidziyo. Iyo yekuvimbika ine 100% yeiyo LLC. Ndiwe LLC maneja. Iwo maakaundi ebhangi anoitirwa muI LLC. Ndiwe siginecha kumaakaundi ebhengi.
Nekudaro, kuongorora, iyo trust ine yavo yekune dzimwe nyika LLC. Iwe ndiwe maneja weoffshore LLC. Iwe unochengetedza kusaina kutonga pamusoro pebhengi maakaundi.
Kana "Chakaipa Chinhu" Chichiitika
Kana izvo "zvakaipa" zvikaitika, wematirastii anopinda mukati kuti akudzivirire uye otsiva iwe semaneja weiyo LLC. Nekudaro, iwe paunorairwa kudzosa mari, mutirastii, anogara kunze kwenyika uye asingasungwe nezvinodiwa nedare remunharaunda, anomira akachengetedza maakaundi ako.
Kudzokororazve, kune kuchengetedzeka kwemari uye rugare rwepfungwa rwemutengi, iyo chete nguva iyo mutirastii anowanzo pindira ndipo apo matare anotora mari yako. Saka, sezvambotaurwa, zvirinani kuisa mari yako kuchombo chepamutemo chakadzivirira mari yevatengi nguva dzese pane kuve nechokwadi che100% kuti wako anokumhan'arira zviri pamutemo anotiza nehupfumi hwako hwawakawana zvakaoma, haubvume here ?
Kana icho "chinhu chakaipa" chikaenda kure tambo yekudzora, manejimendi eI LLC, yodzokera kwauri uye iwe wadzokera pachigaro chemutyairi mari yako yese mu-tact. Paunenge uri pakati pekumanikidzwa kwepamutemo, trasti wako anogona kubhadhara zvikwereti panzvimbo yako. Vanogona kuendesa mari kune vanhu vaunovimba avo vanozokuchengeta iwe, nezvimwewo, Saka, iwe unochengetwa nemari, asi vadzivisi vako havagone kutora paws yavo pamari yako. Mhedzisiro mhedzisiro ndeyekuti mari yawakashandira uye yaunoshanda yakachengeteka uye yakachengeteka.
Yekupedzisira Asset Dziviriro Turu
Iwe unowana chete mukana mumwe pasi pano. Nekudaro, kunakirwa nedziviriro yatiri kutaura nezvayo pano inoda kuita kwako. Ita kuti chivimbo chisimbiswe. Isa mari yako mairi. Isu takaona vatengi vazhinji vachititenda zvakanyanya nekuvabatsira kunakirwa nezvakanaka zvesarudzo iyi uye nekuchengeta zvese zvavakashandira. Kune rimwe divi, isu takaonawo vatengi vachirasa zvese kuburikidza nekuoma mitezo kwekuongorora.
Kune mamwe mapoka ezvido zvekuzvifarira, senge nhengo dzevashandi vezvemitemo vasingabhadharwe kana zvinhu zvako zvadzivirirwa, ndiani angaedza kukukonesa kutanga trust. Ivo vanogona kuedza kukutyisidzira uye vanongedze dzimwe dzisingawanzoitika kesi apo mutongi asina kutevedzera mutemo uko ivo vanowana matrust aya vakatsoropodzwa. Zvichatadza kuudzwa nevanozvinyima ndiyo nyaya yese. Muchiitiko cheAnderson, semuenzaniso, kuvimba kwacho kwakamisikidzwa zvisirizvo. Gweta rakamisikidza trust iyi rakaita vatengi varo vese vanobatsirwa netrust nevadziviriri vetrust.
Uku kwaive kukanganisa kweupenzi pachikamu chegweta nekuti chakaisa iye anowana chinzvimbo chekuwedzera chekuve nesimba pamusoro pekuchinja matirastii nevanozobatsirwa. Mutongi akati ivo nekuti ivo vanobatsirikana vaive zvakare vadziviriri ivo vakagadzira zvavo zvisingaite kuita. Nhau dzakanaka kwazvo kuti nyaya iyi yaive testamente isingatendeseki yekuti kunyangwe mune iyo kesi iyo trust yakagadzwa zvisirizvo, iyo trust ichiri kuchengetedza midziyo yemutengi.
Mhosva dzematare Chikamu cheHupenyu
Bindu rega rega rine tupukanana nehuswa. Nekudaro, gadheni rega rinofanirwa kutarisirwa. Kwete kufunga kudaro kupusa. Kuchengeta munda kunotora matanho. Kuchengetedza mari yako hakuna kusiyana. Unofanirwa kutora matanho ekudzivirira gadheni rako rezvemari kana zvipembenene zviri pamutemo nemasora zvichazotora nzvimbo. Kuchengeta gadheni rine hutano, chiito chinodiwa.
Kudzivirirwa kwakanyanya kwakasimba kunovimbwa netrust ndeyemari yemvura yakachengetwa muakaundi yepasi rose yakachengeteka. Bhengi iro rinoshandiswa harifanirwe kunge riine bazi rinoenderana mukati menyika yako. Nezve zvivakwa, matare emunharaunda anogona kutora zvivakwa zvemuno. Nekudaro, kuve neyako chivakwa mukati meiyo LLC iyo muridzi wetrust kwakanaka. Nekudaro, kana icho chinhu chakaipa chikasimudza musoro wayo wakashata zviri nani kukurumidza kutengesa zvivakwa uye kuchengetedza mari kumahombekombe pane kurasa zvivakwa zvese pamwechete. Seimwe nzira, munhu anogona kurekodha nhema zviri pamutemo kupokana neiyo chivakwa uye nekukiya mari yacho muakaundi yakadaro mukati meiyo trust / LLC chimiro.
Isu Tinodzivirira Nyanzvi
Kazhinji, isu tinogadzira matrust evamiriri avo, zvakare, vanovatengesa zvakare kune avo vatengi. Isu tinodzidzisawo semidziyo yekuchengetedza zvinhu kunhengo dzevashandi vepamutemo. Uye zvakare, isu tinoseta huwandu hwakawanda hwetrust zvakananga kune vedu vatengi. Kuronga kwekuvaka dzimba kunogona zvakare kuwedzerwa kune iyo trust; iyo legalese vhezheni ye, "Kana ndafa zvese zvinoenda kune mumwe wangu uye kana isu tese tichifa zvese zvinoenda zvakaenzana migove kuvana," semuenzaniso.
Ngwarira mupi webasa mumusika uyo maitiro ake ari kusimudzira chivimbo chake nekuzvidza imwe neimwe nzira yekuchengetedza midziyo, kusanganisira sarudzo yatiri kukurukura pano. Anosimudzira yake isina kusimba kuvimba kwenzvimbo, iyo isingamiriri mudare, uye inoshoresa sarudzo dzese asi dzake. Pasina mubvunzo kutaura, haataure kuwanda kwezviitiko zvichiratidza simba rekuvimba muCook Islands. Iye anongokurukura chete mashoma mashomanene ematare apo vatongi vasina kutevedzera mutemo uye vakapa runyararo kune vanovimba vanogara. Uyezve, anotamba achitenderedza icho chokwadi chekuti kuvimba kwakadzivirira mari yemutengi nguva dzese.
Dambudziko rinopenya nesarudzo yaanosimudzira ndeyekuti kuvimba kwake kwemuno kunogona kubviswa senhunzi pasi pemhuno yemutongi wemuno. Naizvozvo, nesimba risingaenzaniswi rakaratidzirwa rakadzokororwa neCook Islands, vazhinji vedu mundima yekudzivirira yeasset vasina zvikonzero zvakashata tese tinobvuma kuti kuvimba kunotaurwa pano kunopa, nekure, chengetedzo yakasimba kwazvo yemidziyo inowanikwa nhasi.
Fona chero nguva, maawa makumi maviri nemana pazuva, kuti uwane rumwe ruzivo nezve kumisikidza Cook Islands Trust, Nevis LLC uye account yekumahombekombe kuchengetedza yako midziyo.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Ndira 29, 2021
Kurarama Chivimbo vs. Kuda
Yakatemerwa Mutoro Yakatemerwa Kudyidzana
Kumbira Mahara Info
Ndeapi masevhisi aunofarira?
Dziviriro Yezve Asset kubva kumatare edzimhosva Offshore Company Formation US Kambani Kuumbwa Offshore Banking Kuvimba Kwekuumbwa Estate Planning mwe